DHEGEYSO-Ciidanka Itoobiya oo ka baxay deegaanka Ceel-cali ee G Hiiraan. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Ciidanka Itoobiya oo ka baxay deegaanka Ceel-cali ee G Hiiraan.
Oktoobar 11, 2016 12:05 b 1
Ceel-cali, Oct 11 2016–Ciidanka dalka Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka nabad ilaalinta midowga Africa ee AMISOM ayaa lagu soo waramayaa inay ka bexeen deegaanka Ceel-cali ee gobolka Hiiraan.
Dadka deegaanka Ceel Cali ayaa sheegay in ay arkayeen gadiidka gaashaaman ee Ciidanka Itoobiya oo kasii baxaya halkaa, una jiheystay dhinac magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Gudoomiyaha Deegaanka Ceel Cali ee gobolka Hiiraan Abiikar Yaroow Cumar ayaa sheegay in saaka aroortii dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab ay madaafiic ku garaaceen meel u dhow saldhiga ciidanka Itoobiya ay ku leeyihiin Cali Cali.
DHEGEYSO-Mid kamid ah isimada soo jireenka ah ee G Mudug oo kadigey colaada Galkacyo.
DHEGEYSO-Dastuurkii maamulka Hirshabeelle oo lameel mariyey.
Mohammed Osman abdi 4 years ago
Asc radio daljir waxaan ahay wariye kusugan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaan kahowlgalaa mid kamid ah warbaahinta madaxa banaan ee kahowlgala gudaha magaalada baladweyneee kwrama sxb wakiil wareed